CBN Emepela Nsogbu Ego zuru ụwa ọnụ maka ndị na-eto eto Nigeria
CBN mepere Moneyma Aka Ego zuru ụwa ọnụ maka ndị Na-eto Eto Naịjirịa
Girlsmụ agbọghọ nọ na ICT Day 2021: ụmụ nwanyị Africa 4 nwere mmetụta na ICT na-akwalite Nsonye malemụ nwanyị na Tech
Ebumnuche Readinggụ Ihe Ndepụta Mmemme YouTube Africa na-ebido ịkwọ aka ntinye aka na-agụ akwụkwọ
Mbido Crypto nke Naijiria, AFEN Otu na-ebuli $ 1million na Token Sales Round
Ndụmọdụ 7 maka Onlinezụ ahịa Onlinentanetị Na-aga nke Ọma
Iji mee ememme izu 2021 Global Money Week (GMW), Central Bank of Nigeria (CBN) na-ahazi asọmpi mgbasa ozi mmekọrịta akpọrọ "Global Money Challenge" ebe ndị ntorobịa nwere ike igosipụta onyinye ha, nka na nka ha.
Ebumnuche nke ndị anamachọihe ka ha gosipụta onyinye ha, ọrụ nka ha na nka ha site na ikenye vidio 120 sekọnd ma ọ bụ foto gbasara etu ị ga-esi lekọta onwe gị anya wee lekọta ego gị anya.
Ndi meriri na nsogbu ahu nwere ohere merie Apple MacBook Pro, HP Pavilion x360, Apple ipad Pro
Chọrọ maka isonye
Iji tozuo maka isonye na asọmpi ahụ, ndị ntinye ga-ezute ihe ndị a:
Ndị sonyere ga-abụrịrị ndị nọ n’agbata afọ 18 na 35 wee bụrụ ndị bi na Nigeria
Ndị ọrụ, ndị isi ma ọ bụ ndị nnọchi anya nke CBN, Financiallọ Ọrụ Ego na ndị na-achịkwa ego ndị ọzọ erughị eru isonye na ịma aka ahụ.
Ndị nabatara ga-enwerịrị ezigbo akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta dịka Instagram, Twitter ma ga-agbaso usoro mgbasa ozi mmekọrịta CBN. Ndị sonyere nwere ike itinye otu ntinye na ntanetị mgbasa ozi mmekọrịta, Instagram ma ọ bụ Twitter.
Nkọwapụta Instagram ga-abụrịrị profaịlụ ọha iji banye maka nsogbu ahụ
Ndị mmeri ga-enye ihe akaebe nke adreesị na afọ, akwụkwọ ọmụmụ na / ma ọ bụ nkwupụta, ụgwọ ọrụ na ụzọ ọ bụla ọzọ dị mma iji mata maka onyinye a ga-enye.
Rịba ama na:
A ga-akọwapụta ihe nrite maka asọmpi ahụ na sọftụwia mgbasa ozi nke CBN;
Naanị ntinye iri (10) ka a ga-edebanye aha ma kpọọ maka Grand Final
A ga-ekwuputa nsonaazụ nke Nsogbu Ego Global na nyiwe mgbasa ozi nke CBN n'ime ụbọchị 15 nke mmechi asọmpi ahụ. Nkwupụta ahụ nwere ike ịgụnye mbipụta nke aha (s), foto, ọnọdụ na nkọwa nke ihe nrite nke onye mmeri ọ bụla
Virtual Grand Final tinyere nhọrọ na ọkwa nke ndị mmeri na Tuesday
Ndị mmeri ga-enweta ihe nrite ha karịa ụbọchị 30 mgbe ememme Grand Final na-eme ememme ahụ
A ga-eme ezi uche iji kpọtụrụ ndị mmeri maka ọ dịkarịa ala ụbọchị 5. Na enweghị nzaghachi sitere n'aka onye mmeri kachasị amasị, enwere ike ịtụle onye mmeri edebe maka ihe nrite ahụ. CBN agaghị ebu ọrụ, a ga-ewepụkwa ya n'ụgwọ ọ bụla n'ihi enweghị ike ịzaghachi site n'aka ọkachasị onye mmeri ọ bụla.
You bụ onye na-eto eto na onye nwere ọgụgụ isi nke Naijiria nke mejupụtara njirisi ndị a kpọtụrụ aha n’elu, ị nwere ike ịga n’ihu itinye akwụkwọ Ebe a. Oge imechi maka ngwa bụ Fraịde, Machị 26, 2021.